နိုင်ငံသား တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ (ထိုင်ဝမ်)
မာရင်းကျို၏ ဘိုးဘွားများမှာ တရုတ်ပြည် ဟူနန်ပြည်နယ်မှ (湖南省) ဟတ်ကားလူမျိုးများ (客家) ဖြစ်ကြသည်။  သားချင်း ၅ ယောက်အနက် တဦးတည်းသော သားယောက်ျားဖြစ်သည်။  ဟောင်ကောင်တွင် (香港九龍) မွေးဖွားသည့် မာရင်းကျိုသည် ၁ နှစ်သားအရွယ်တွင် မိဘများနှင့်အတူ ထိုင်ဝမ်သို့ (台灣) ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုင်ဝမ်တက္ကသိုလ်မှ (國立台灣大學) ဥပဒေဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်သို့သွားကာ ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် နျူးယောက်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေပညာရပ် မဟာဘွဲ့（LL.M.）၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူဘွဲ့ကို (S.J.D.) အသီးသီးရရှိခဲ့သည်။ မာရင်းကျိုသည် အမေရိကန်၌ ပညာသင်ယူနေချိန်အတွင်း ကျိုးမေချင်းနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားကာ သမီးနှစ်ယောက်ကို ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
မာရင်းကျို၏ မြို့တော်ဝန်ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း မြို့ပတ်အမြန်ရထား (Metropolitan Rapid Transit, MRT) ရှင်းတျန့်လိုင်း၊ ရှောင်နန်မင်လိုင်း၊ ရှောင်ပိထံလိုင်းခွဲ၊ နန်ကန်လိုင်း၊ ပန်ချောင်လိုင်း၊ ထူချန်လိုင်းစသည့် လိုင်း ၆ လိုင်း ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကာ ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်သည်။ ၈ နှစ်အတွင်း ခရီးသည်ဦးရေ ၆.၃ ဆတိုးလာသည့်အပြင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Nova၊ CoMET အဖွဲ့အစည်းများ၏ စိတ်အချရဆုံး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် အဖြစ် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၁ ခုနှစ် နာရီထိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်တွင် ရေဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှု အားနည်းခဲ့သောကြောင့် ရထားလမ်း မြေအောက်အပိုင်းသို့ မိုးရေများ ဝင်ရောက်ကာ ထိုင်ပေမြို့မှ (台北市) ပန်ချောင်မြို့သို့ (板橋市) ပြေးသည့် အပြာလိုင်းကို ခေတ္တရပ်နားခဲ့ရပြီး ထိုင်ပေဘူတာကို ၃ လကြာ ပိတ်ခဲ့ရသည်။
မာရင်းကျိုသည် မြို့တော်ဝန်သက်တမ်းအတွင်း လမ်းမကြီးများမှ လိုင်းလေးလိုင်း ရှိသည့်အနက် တလိုင်းအား ဘတ်စ်ကား လိုင်းကားသုံး သီးသန့်လမ်းများအဖြစ် စီစဉ်ပေးပြီး မြို့သူမြို့သားများအားလည်း လိုင်းကား၊ မြို့ပတ်အမြန်ရထား အစရှိသည့် အများသုံးယာဉ်များကို စီးနင်းအသုံးပြုကြဖို့ တိုက်တွင်းအားပေးခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ သီးသန့်လိုင်းများ စီစဉ်ပေးခြင်းကြောင့် အလုပ်တက်ချိန်တွင် ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့လေ့ရှိသည့် ထိုင်ပေလမ်းမများတွင် လိုင်းကားများ ပိုမို မြန်ဆန်စွာ မောင်းနှင်စေနိုင်သည်။ မြို့တော်သူမြို့တော်သားများကလဲ ထောက်ခံကြသည်။ သို့သော် ရူးစဗက်လမ်းတွင်မူ ပြဿနာပေါ်ခဲ့သည်။ ယာဉ်ကျော စီစဉ်မှု မကောင်းခြင်းကြောင့် စတင်အသုံးပြုခဲ့ချိန်မှစ ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့မှု ပိုမိုဆိုးဝါးစေခဲ့သည့်အပြင် မတော်တဆ ယာဉ်တိုက်မှုလည်း များလာစေသည်။ ထို့အတွက် မြို့တော်သူမြို့တော်သားများသည် မြို့တော်ဝန်မာရင်းကျိုအပေါ် မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
မောင်းခုံးဂွန်ဒိုလာသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် လည်ပတ်သည့် အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ထိုင်ဝမ်တွင် လူကြိုက်များသည့် လည်ပတ်စရာ နေရာသစ်တခု ဖြစ်လာသည်။ ထိုင်ပေ မြို့တွင်းအမြန်ရထားကော်ပိုရေးရှင်းမှ(Taipei Rapid Transit Corporation, TRTC) တာဝန်ယူ လည်ပတ်သည့် မောင်းခုံးဂွန်ဒိုလာသည် ၄,၀၃၀ မီတာရှည်ပြီး ထိုင်ပေမှုကျတိရစ္ဆာန်ရုံမှ မောင်းခုံးတောင်ပေါ်အထိ ဂိတ် ၄ ဂိတ်ရှိသည်။ မောင်းခုံးတွင် အေးအေးဆေးဆေး အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်သည့် ရေနွေးကြမ်းဆိုင်များ ရှိသည်။ သို့သော် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှစ၍ မုန်တိုင်းဝင်၍ မြေများပြိုကျသောကြောင့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ခေတ္တပိတ်ထားသည်။ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များကို TRTC Archived 1 March 2009 at the Wayback Machine. ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြည့်နိုင်သည်။
အားကစားအပိုင်းတွင် မာရင်းကျိုလက်ထက်တွင် ထိုင်ပေမြို့ရှိ မူလဘေ့စ်ဘောကွင်းနေရာတွင် Taipei Arena ဟုအမည်ပေးထားသည့် မိုးလုံလေလုံကွင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရှိရင်းစွဲ အားကစားကွင်းများ၊ အားကစားရုံများကို ပြင်ဆင်မွန်းမံခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အာရှဖလား အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲကို ထိုင်ပေမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထိုင်ပေမြို့သည် ဂရိနိုင်ငံ အေသင်မြို့ကို ၅၂ မဲ ၃၂ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိကာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဆွံ့အနားမကြား နွေရာသီ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော် ကျင်းပခွင့်ရခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည့် ဆွံ့အနားမကြား အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှ အားကစားသမား ၁ သောင်းကျော် တက်ရောက်ဆင်နွှဲကြမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယသမ္မတရာထူးဖြင့် ရှောင်းဝမ့်ချန်နှင့်တွဲဖက်၍ လည်းကောင်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးဖြင့် ပီအက်ဖ်ပီပါတီ (親民黨) ဥက္ကဋ္ဌ ဆုန့်ချူယွီနှင့် (宋楚瑜) တွဲဖက်၍လည်းကောင်း သမ္မတရွေးကောက်ပွဲများတွင် ရှုံးနှိမ့်ခဲ့သည့် ကွန်မင်တန်ဥက္ကဋ္ဌ လျန်ကျန့်သည် (連戰) ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ရာထူးသက်တမ်းပြည့်သဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်မယူတော့ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကွန်မင်တန်ပါတီ၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံမည့်သူဟု အများက ထင်မှတ်ထားသည့် မာရင်းကျိုနှင့် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဝမ်ကျင်းဖိန်တို့ (王金平) ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် မာရင်းကျိုက မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့သည်။
ထိုနေ့တွင် မာရင်းကျိုသည် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးမှ ဆင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၂၀၀၈ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု ကြေညာလိုက်သည်။ မာရင်းကျို၏ အစိုးရဘဏ္ဍာငွေအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုင်ပေမြို့နယ်တရားရုံးမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် မာရင်းကျိုအပြစ်မရှိကြောင်း စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေမှ အယူခံဆက်ဝင်ခဲ့သော်လည်း ထိုင်ဝမ်အဆင့်မြင့် တရားရုံးမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပယ်ချလိုက်ပြီး ပထမအကြိမ်စီရင်ချက်အား မပြောင်းလဲခဲ့ပေ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဗဟိုတရားရုံးချုပ်မှ မာရင်းကျို အပြစ်မရှိကြောင်း နောက်ဆုံးအဆင့် စီရင်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ဒီပီပီပါတီသမ္မတလောင်း ရှဲ့ချန်ထိန်က မာရင်းကျိုတခါက အမေရိကန်ဂရင်းကတ်ရှိခဲ့ဖူးသည်ကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ မာရင်းကျိုက ယခင်အမေရိကန်သို့ ပညာတော်သင်သွားချိန်က ဂရင်းကတ်ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း လက်ရှိတွင် စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် ၎င်း၏မိသားစုဝင်၌ တဦးတယောက်မှ ဂရင်းကတ် ကိုင်ဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်း အတိအလင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။  သို့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် ၎င်း၏သမီးဦးမှာ အမေရိကန်တွင် မွေးဖွားသူဖြစ်၍ အမေရိကန် နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရကာ မာရင်းကျိုသည် မျိုးချစ်စိတ်ရှိမရှိ လူအချို့က သံသယဝင်လာကြသည်။ 
မာရင်းကျိုသည် ရာထူးတက်မိန့်ခွန်းတွင် ထိုင်ဝမ်-ပြည်မဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း "ပြည်မနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမည်မဟုတ်၊ ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး ကြေညာမည်မဟုတ်၊ ဦးစွာစစ်ထိုးမည်မဟုတ်" (不統, 不獨, 不武) ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ 
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထုတ် တိုင်းမ် (Time) မဂ္ဂဇင်းတွင် နှစ် ၆၀ ကြာ ထိတွေ့မှုမရှိခဲ့သည့် ထိုင်ဝမ်-ပြည်မဆက်ဆံရေးသည် ၃ လတာ ကာလအတွင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ မာရင်းကျိုသည် ထိုင်ဝမ်နှင့် ပြည်မအကြား စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွင် စင်းလုံးငှား လေယာဉ်များ ပြေးဆွဲစေခဲ့သည်။ ဤသည်မှာလည်း ထိုင်ဝမ်သမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဒီ့မတိုင်မီ ထိုင်ဝမ်နှင့် ပြည်မအကြား သွားလာသည့် ခရီးသည်များသည် ဟောင်ကောင်၊ မကာအို ကဲ့သို့သော တတိယဒေသမှ တဆင့် သွားလာကြရသဖြင့် အချိန်ကုန်လူပန်း ဖြစ်ရသည်။ ထို့အပြင် ပြည်မသား ခရီးသည်များအား ထိုင်ဝမ်သို့ တိုက်ရိုက် လာရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပြည်မ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည့် ထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးသမားများအပေါ် ထားရှိသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို လျှော့ချပေးပြီး ပြည်မစီးပွားရေးသမားများ ထိုင်ဝမ်၏ စတော့ရှယ်ရာများ ဝယ်ယူခွင့်ပေးရန်လည်း ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ 
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဘေဂျင်း (北京) အခြေစိုက် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အစည်းအရုံး (海峽兩岸關係協會 Association for Relations Across the Taiwan Straits, ARAT) ဥက္ကဋ္ဌ ချန်ယွင်လင် (陳雲林) ထိုင်ဝမ်သို့ မလာမှီ အတိုက်အခံ တပ်စိမ်းမှ (ဒီပီပီပါတီတံဆိပ်မှာ အစိမ်းရောင်ဖြစ်သောကြောင့် ဒီပီပီပါတီနှင့် ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးလိုလားသည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများအား ထိုင်ဝမ်တွင် တပ်စိမ်းဟုခေါ်သည်။) ချန်ယွင်လင်၏ ခရီးစဉ်သည် ထိုင်ဝမ်၏ အချုပ်အခြာအာဏာအား ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု ဝေဖန်ပြောဆိုကြသည်။  ဒီပီပီပါတီဦးဆောင်သည့် ချန်ယွင်လင်အား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲတွင် အကြမ်းအားဖြင့် လူပေါင်း ၅ သိန်းခန့်ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။  ဆန္ဒပြသူများက သမ္မတမာရင်းကျိုက တရုတ်ပြည်မနှင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကန့်အသတ်များအား အတိုင်းထက်လွန် မြန်ဆန်စွာ လျှော့ပေးခြင်းသည် ထိုင်ဝမ်အား ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။  သို့သော်လည်း ချန်ယွင်လင်၏ ထိုင်ဝမ်ခရီးစဉ်နှင့် အစိုးရ၏ ထိုင်ဝမ်-ပြည်မ ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ဖြစ်လာရေး မူဝါဒအား ထောက်ခံသူ ၅၀ % မှ ၆၀ % အထိရှိကြောင်း လူထုစစ်တမ်းများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ 
ချန်ယွင်လင် ထိုင်ပေသို့ရောက်ရှိနေခိုက်တွင်လည်း ပြင်းထန်သည့် ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြမှုအတွင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ရဲဘက်မှ လူပေါင်း ၁၄၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သလို ရဲအတော်များများလည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။   ၁၉၉၂ ခုနှစ် နားလည်မှုအရ ချန်ယွင်လင်က သမ္မတမာရင်းကျိုအား သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ်တွင် မာရင်းကျိုအား “သမ္မတ”ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အလားတူပဲ ထိုင်ဝမ်ကိုယ်စားလှယ်များ ၂၀၀၈ ဇွန်လက ဘေဂျင်း၌ ဟူဂျင်ထောင်းနှင့် (胡錦濤) တွေ့ဆုံစဉ်တွင်လည်း “သမ္မတ”ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
↑ the Star online News။ 12 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ သမ္မတအိမ်တော် ဝက်ဘ်ဆိုက်။7May 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 中時電子報။ 24 March 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Taiwan president heads to Latin America, via US". AFP. Retrieved on 2008-08-14[လင့်ခ်သေ].
↑ 台灣•就職演說強調不統不獨不武•馬英九吁兩岸協商_新聞頁_北美新浪網။ 17 September 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Talking to Taiwan's New President". Time. Retrieved on 2008-08-14။ 17 September 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 扁嗆特偵組：馬上來捉我 (Chen Shui-bian challenges the Special Investigation Unit: Come Arrest Me At Once) Archived7October 2008 at the Wayback Machine. (in Traditional Chinese) Liberty Times. Retrieved on 2008-10-27.
↑ http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/sep/7/today-fo1.htm 馬稱兩岸非國與國 李斥叛國 (Ma: "Special non-state-to-state" Lee: "Treason") Archived 15 September 2008 at the Wayback Machine.(in Traditional Chinese) Liberty Times. Retrieved on 2008-10-27.
↑ Jennings၊ Ralph။ "Halfamillion march in Taiwan against China, president" (in English)၊ Yahoo! News and Reuters၊ October 25, 2008။ October 28, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [လင့်ခ်သေ]
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 19 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Direct flights between China and Taiwan begin - International Herald Tribune။ 17 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 December 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာယင်းကျို&oldid=718742" မှ ရယူရန်